Qur'aana Archives - Page 3 of 18 - Ibsaa Jireenyaa
October 10, 2021 Sammubani Leave a comment
Sagaagalummaa irraa dheessu
Kutaa darbe keessatti “Sagaagalummatti affeeru” jalatti tuqaalee ijoo ilaalle turre. Niitin ministeera Ijipt jaalala cimaan qabamuun Yuusufin sagaagalummaatti affeerte. Garuu inni affeerraa kana diduun irraa dheesse. Mee dhirri yeroo ammaa affeerraa akkanaa irraa dheessu eessa jiraa? Osoo hin affeeraminiyyu sagaagalummaa fi sababoota isaa irraa kan dheessu nama meeqaa? Allahu musta’aan. Mee amma akkaata Yuusuf zinaa (sagaagalummaa) irraa itti dheesse haa ilaallu:
October 2, 2021 Sammubani Leave a comment
Zinaatti (Sagaagalummaatti) Affeeru
Suurah (boqonnaa) Yuusuf keessatti taaten guddaan garmalee nama hawwatu, keessumayyu qalbii dargaggootaa fi shamarrani butu, taate haati manaa ministeera Ijipt Yuusufin badiitti affeeru fi inni badii hojjachuu diduuti. Taaten kuni qormaata guddaa ilma nama qunnamu ifatti baasa. Sagaagalummaa hojjachuu irraa of eegun hangam sadarka namaa akka olkaasu asirraa ni hubatama. Yuusuf sagaagalummaa diduun waan irraa dheessef seenan qubeewwan warqiitiin isa katabe, hanga Guyyaa Qiyaamaatti seenan isaa ni dubbifama. Agartee, namni zinaa irraa yoo dheesse hangam akka kabajamuu! Mee gara taate guddaa kanatti isin haa dabarsuu:
Dubbisa Itti Fufi
September 26, 2021 Sammubani Leave a comment
Asii gaditti barnoota guddaa seenaa Yuusuf irraa arganna.
September 19, 2021 Sammubani Leave a comment
Yakka Ergaa Raawwatanii Booda Sababa sobaa dhiyeeffachuu
Obboleeyyan Yuusuf Yuusufin eelatti erga gatanii booda wanta gochuu qabanii fi rakkoo himachuu qaban itti yaadan. Mee haa ilaallu:
Tafsiira Suuratu Yuusuf-Kutaa 5
September 12, 2021 Sammubani 2 comments
Shira Dubbii Mi’aawan Haguuggame
Dhugumatti, yommuu namni tokko miidhaa namarraan gahuu barbaadu, tooftaalee adda addaatti fayyadama. Tooftaalee sanniin keessaa tokko dubbii isaa mi’eessudha. Yuusufin irra miidhaa dhaqqabsiisuuf tooftaalee obboleeyyan isaa itti fayyadaman beekuun, dhara nama miidhaa nurraan gahuuf deemu jalaa akka baraaramnuuf nu gargaara. Mee tooftaalee kana haa ilaallu:
Tafsiira Suuratu Yuusuf-Kutaa 4
September 5, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe irraa itti fufuun tafsiira (ibsa) Suuratu Yuusuf ilaalu itti fufna.
Tafsiira Suuratu Yuusuf-Kutaa 3
August 29, 2021 Sammubani One comment
Ji’a lamaaf sababa kitaaba “Yaadaa fi Milkaa’ina” jedhu waliin ko’oomaa turreef addaan baane turre. In sha Allah kitaabni kuni yeroo maxxanfametti harka keessan gahee akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Amma, seenaa mi’aawaa waliin bakka dhaabbanne irraa kaanee itti haa fufnu.
June 27, 2021 Sammubani One comment
Kutaa darbe keessatti waa’ee abjuu ilaalle jirra. Tuqaalee ijoo abjuun wal qabatan kaasne jirra. Yaadachisaaf abjuun bakka sadiitti qoodamti: Abjuu gaarii Rabbiin irraa gammachiisa taate, abjuu haasasa nafsee fi abjuu nama gaddisiistu tan sheyxaana irraa taatedha. Har’as itti fufuun barnoota aayah armaan gadi lamaan irraa guduunfannu ilaalla.
June 19, 2021 Sammubani 4 comments
Abjuu Dhugaa Arguu
June 14, 2021 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti, seenaan Nabiyyoota seenaa nama barsiisuu fi bu’aa bayii baay’ee qabuudha. Yommuu seenaa isaanii ilaalan, ‘Qormaata ciccimaa keessaan erga darbanii booda malee edaa milkaa’inni fi sadarkaa ol’aanaa irra gahuun akkanumatti hin argamu!’ nama jechisiisa. Nabiyyoonni namoota hunda caala Rabbiitti dhiyoo fi jaallatamoo ta’aniidha. Garuu isaan kana hunda waliin qormaata eenyullee hin qoramne qoramu. Kuni kan agarsiisu, milkaa’inni fi sadarkaa ol’aana irra gahuun wanta tasaa osoo hin ta’in qormaata ciccimoo keessa erga darbanii booda. Namni Rabbii olta’aatti amane (mu’iminni) yommuu kana hunda arguu fi beeku, qormaanni fi rakkooleen isa qunnaman milkaa’innaa fi sadarkaa ol’aanatti isa olkaasuuf akka ta’e ni hubata. Kanaafu, wanta isa qunnameef hin dallanu, Rabbii olta’aa hin komatu, ‘Rabbiin maaliif akkana na godhaa?` hin jedhu. Nabiyyoota fakkeenya gochachuun fuundura isaatti ifa milkaa’innaa fi sadarkaa ol’aana irra gahu ilaala.